प्रचलन Archives - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com प्रचलन Archives - खबर प्रवाह
ज्योतिष शास्त्र अनुसार हरेक राशिको छुट्टा-छुट्टै भाग्य, व्यवहार र आचरण हुने गर्छ। कुण्डलीमा हुने विभिन्न ग्रहको प्रभाव अनुसार राशिहरुको भाग्य निर्धारण हुने ज्योतिष शास्त्रको मान्यता रहेको छ। केहि राशि हुनेहरु सजिलै सफल हुन्छन्। तर केहि राशि हुनेहरुले भने सफल हुन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। यी र यस्ता विभिन्न तथ्यहरुलाई ज्योतिष शास्त्रले प्रष्ट्याउने गर्दछ। ज्योतिष शास्त्रका […]
कोही व्यक्ति शान्त र धैर्य स्वभावका हुन्छन् भने त्यस्तै प्रकारले कोही हरेक कुरामा आफ्नो रिस देखाउनमा माहिर हुन्छन् । यस्तै प्रकारले ज्यादा व्यक्ति पैसा सम्हाल्न त कोही हाई लाइफ स्टाइल जिउन मनपराउँछन् ।यी ६ राशिका महिलाहरु निक्कै खर्चालु स्वभावकी हुन्छन् ! वृष राशि यो राशि भएका महिलाहरुलाई महंगो चिज,कपडा,जुत्ता आदिहरु किन्नमा एकदमै रुचि राख्दछन् । […]
एक व्यक्तिको जन्म भएपछि, उसको मुहूर्ता र नक्षत्र कुन तर्फ छ , कुन मितिमा, कुन पक्षमा उसको जन्म भयो ,त्यसले उसको भविष्य निर्धारण गर्दछ। कुन प्रहरमा जातकको जन्म भयो भन्ने थाहा भएर मात्र उसको भविष्य निर्धारण गर्न भने निकै गार्हो हुन्छ किनकि यसको लागि नक्षत्र, मुहूर्ता जस्ता कुरा पनि आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिको जन्म कुन […]
काठमाडौँ । यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको विशेष पूजाआजा गरी लक्ष्मीपूजा गरिँदै छ । यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज कार्तिक कृष्ण औँसीको साँझ ऐश्वर्य, धन धान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजाआराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मीपूजा पर्व मनाइँदैछ । सफासुग्घर र लिपपोत नगरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका आधारमा आज बिहानै घर सफासुग्घर […]
काठमाडौं।नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको भाइटीकाको उत्तम साइत बिहान ११ः३७ बजे दिएको छ । मङ्सिर १ गते मध्याह्नकालमा टीका लगाउन बाधा नपरे पनि साइत खोज्नेका लागि मकर लग्न, वृष नवमांश, अभिजित् मुहूर्तको शुभसाइत दिइएको छ । राज्य सञ्चालकले भने साइतमै टीका लगाउनुपर्ने र सर्वसाधारणका लागि मध्याह्नकालमा टीका लगाउन कुनै समस्या नरहेको समितिका अध्यक्ष प्रा […]
काठमाडौं । भगवान विष्णु यस संसारको हर्ता–कर्ता हुनुहुन्छ । विष्णुसहस्रनाम पाठ एक धेरै अचम्मको र प्रभावशाली पाठ हो । यसले सबै समस्याहरूको समाधान सम्भव बनाउँदछ । उस विष्णुको आशिषले गम्भीर रोगहरूबाटपनि मुक्ति हुने विश्वास गरिन्छ । विष्णुसहस्रनाम भगवान विष्णुको हजारौं नामको एक प्रमुख स्रोत हो, जसको पठनले सबै समस्याहरूलाई हटाउँछ । भक्तहरूको लाखौं […]
त्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवन सुख र समृद्धिको साथ बाँच्ने इच्छा हुन्छ। त्यसैको लागि अह्रेक मानिस यसका दिन रात परिश्रम गर्छन्। धर्मशास्त्रमा यो भनिएको छ कि धन प्राप्तिको लागि देवी लक्ष्मी प्रशन्न हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शास्त्रमा केहि उपाय पनि उल्लेख गरिएको छ जुन उपाय गर्नाले धनको कमी हुने छैन। धन तथा वैभवको अभावलाई हटाउन कसरी […]
सोमबार:१. सोमबार जन्मेका व्यक्तिहरुको स्मरण शक्ति निकै तेज हुन्छ ।२. तपाईं मृदुभाषी हुनुहन्छ तर तपाईं निकै मुडी हुनुहुन्छ ।३. तपाईं निकै संवेदनशील हुनुहुन्छ त्यसकारण निकै चाँडै नर्भस हुनुहुन्छ ।४. तपाईंलाई आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन निकै रमाइलो लाग्छ ।५. तपाईंका लागि सम्बन्ध निकै महत्व राख्नेछ ।६. तपाईं पढाईमा तिक्ष्ण हुनुहुन्छ र आफ्नो करियरमा निकै माथि पुग्नुहुन्छ […]
काठमाडौँ । केही काम गर्ने समयमा कयौँ पटक हामीलाई असफलता मिल्ने गर्दछ। त्यसैले हाम्रो काम पुरा हुन पाउदैन्। यसो हुनुमा हाम्रो घरमा राखेका केही चीज नै दुभाग्र्यको कारण बनेको हुनसक्छ। आफ्नो काममा सफलता प्राप्त गर्न र घरमा पैसाको कमी हुन नदिन घरमा केही चीजको विशेष ध्यान राख्नु पर्दछ। घरमा राखिने यी बस्तुका बारेमा ध्यान दिनुहोस् […]
एजेन्सी । अधिकांश मानिसले आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्नका लागि ऋण लिने गर्दछन्। उधारो तथा ल्याएको ऋण तिर्न नसके जीवनमा निकै तनाव खेप्नु पर्ने हुन्छ। ऋणको दलदलमा फसेका व्यक्तिलाई बाहिर निस्कन निकै कठिन हुन सक्छ। जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा ऋणको दोष हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले उधारो तथा ल्याएको ऋण तिर्न नसक्दा निकै समस्या खेप्नु पर्ने हुन्छ। ज्योतिष मनिष […]
धुलिखेलमा बाटो खन्दा फेला पर्‍यो यस्तो मूर्ति ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस र पुण्य प्राप्त गर्नुहोस
काठमाडौँ । धुलिखेलमा केही समयअघि फेला परेको एउटा मूर्ति अहिले निकै चर्चामा छ। काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका-३, बतासे डाँडामा बाटो निर्माण गर्दा उक्त मूर्ति फेला परेको हो। चंखुबेसी मार्ग निर्माणका लागि बाटो खन्ने, सम्याउने काम भइसकेपछि ढलान गर्न ढुंगा बिच्छ्याइँदै थियो। यस क्रममा ढुंगा बाटोछेउ राखिएको थियो। एक दिन एक स्थानीय त्यही बाटो हुँदै जाँदा वनदेवीथान […]